प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न नपाएपछि कांग्रेस रुष्ट «
सभामुख महराको व्यवहार एकपक्षीय भएको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नाराबाजी गर्दै अवरोध प्रयास गरेपछि बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका केही सांसदले प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराले समय नदिएपछि कांग्रेस सांसदले नाराबाजी गरे ।
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, दिलेन्द्र बडुलगायतले सभामुखको कार्यशैलीमाथि आक्रोश व्यक्त गरे । कांग्रेसको असन्तुष्टिपछि सभामुख महराले सीमित सदस्यलाई प्रश्न गर्न दिने भन्दै १ मिनेटका लागि सांसद रिजाललाई प्रश्न गर्न समय दिए । तर, सांसद रिजालले सांसदहरूले प्रश्न गर्न चाहँदा दिनुपर्ने, सीमित भन्न नमिल्ने भन्दै बोल्न इन्कार गरे ।
त्यसलगत्तै सभामुख महराले शून्य र विशेष समय कार्यसूचीबाट हटाइएको भन्दै अर्थ समितिका सभापतिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए । कांग्रेस सांसदहरूले रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरिरहेका बेला होहल्लाकै बीचमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन पेस भयो । त्यसपछि १५ मिनेटका लागि भन्दै बैठक स्थगन गरिएपनि बैठक सूचना टाँस गरी पुस २५ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी स्थगन गरिएको थियो ।
बैठक स्थगन भएपछि संसद् भवन परिसरमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सदनमा सम्बोधन गर्न दिने तर विपक्षीलाई प्रश्न गर्न नदिने सभामुख महराको एकपक्षीय व्यवहार नसच्चिएसम्म सदनको कारवाही अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए । “प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने भए किन संसदमा आएको ? सिंहदरबारबाटै वक्तव्य दिने व्यवस्था थिएन र ?”थापाले भने, “तथ्यलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने अनि प्रश्नबाट डराउने ? त्यसलाई सुभामुखले ढाकछोप गर्र्ने ?” सांसद थापाले सभामुखले कुनै एक पार्टीको पक्ष लिएर प्रश्नका लागि अनुमति दिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
राष्ट्रपतिमाथिको हमला गणतन्त्रमाथिको : ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथिको हमला गणतन्त्रमाथिको हमला भएको बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं नबोल्ने संस्थामाथिको हमला के हो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमाथि प्रश्नसमेत गरे । “जुन संस्था आफैं बोल्दैन, केही गर्दैन । त्यसमाथि हमला गर्नुको उद्देश्य के हो ?” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यो राष्ट्रपतिमाथिको हमला होइन, गणतन्त्रमाथिको हमला हो ।” विवादमा ल्याइएको शितल निवाससम्बन्धी हरेक निर्णय सरकारले गरेको भन्दै ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयको बचाउ गरे । उनले शितल निवास विस्तारको विरोध गर्नु दरिद्रता भएको बताए । “मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुची छैन । गर्नु छ त मुलुकको विकास । अब पनि यो देशको विकास नहुने हो भने कहिले गर्ने ?,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।